Karikoga Kaseke Archives - The Source
Zimbabwe struggling to lure tourists – ZTA
9 months ago by AlfonceTourism
BULAWAYO, June 9 (The Source) – Zimbabwe’s tourism fair, Hlanganani/Sanganai Travel Expo has boosted tourist arrivals by 700,000 since its launch 10 years ago according to the Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer, Karikoga Kaseke. By comparison, Malaysia which launched its ‘Malaysia Truly Asia’… Read More
Zim firms take part in German tourism expo
BULAWAYO, March 7 (The Source) — At least 15 Zimbabwean tourism firms and organisations will exhibit at a major global tourism exposition—International Travel Bourse (ITB)—to be held in Berlin, Germany, this week, an official has said. The expo, which has attracts over 185 countries, kicks off on… Read More
Zim frustrates Kenya Airways VicFalls plan, airline opts for Livingstone
Victoria Falls, June 30 (The Source) – Kenya Airways abandoned plans to service the Victoria Falls route, opting to land in Livingstone, Zambia, after the Zimbabwe government insisted that the east African airline pays royalties to Air Zimbabwe, an official has said. Zimbabwe Tourism Authority… Read More
BULAWAYO, May 16 (The Source) — Bulawayo hotels are suffering from low tourist arrivals, with occupancies hovering around 15 percent since the beginning of year, Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer, Karikoga Kaseke said on Monday. Addressing journalists at a press conference in Bulawayo… Read More
ZTA asks govt to lower 15pct VAT on foreign tourists
BULAWAYO, February 16 (The Source) – The Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has called on the government to lower taxes levied on non-resident tourists’ accommodation to 10 percent or less to allow the industry to recover. Zimbabwe’s cash-strapped government last year unilaterally imposed a 15 percent… Read More
Zimbabwe FY15 tourism earnings expected to grow 80 percent on improved sentiment – ZTA
3 years ago by AlfonceTourism
HARARE, May 15 (The Source) – Zimbabwe’s Tourism authority says it anticipates an increase in annual earnings to $1, 5 billion after an improvement in international sentiment, an official has said. Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive Karikoga Kaseke on Friday said the country had… Read More
HARARE, November 25 (The Source) – The Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) is targeting to bring at least 100,000 Chinese tourists into the country in the next three years, a tourism official has said. Karikoga Kaseke, the ZTA chief executive told The Source that there has… Read More
Tourism arrivals seen falling on Ebola fears
HARARE October 15 (The Source) – Tourist arrivals this year are seen taking a knock as a result of restricted international travel due to the Ebola virus outbreak in West Africa, the Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) said on Wednesday. The ZTA last month said Zimbabwe… Read More
Tourist arrivals flat in H1
HARARE, September 3 (The Source) – Tourist arrivals in the country increased by one percent to 867,163 in the first half of the year compared to 860,995 in the same period in 2013 with more arrivals from Europe, the tourism agency said on Wednesday. “This… Read More
ZTA says KLM pull-out regrettable, pushes for Air Zim subsidy
HARARE, August 1 (The Source) – The Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) on Friday said the decision by Dutch airline, KLM to discontinue its flights to Harare was regrettable and called for government to subsidise struggling national carrier, Air Zimbabwe to allow it to expand its… Read More